Ahoana no hanovan'ny teknolojia fanontana 3D ny ho avintsika | Martech Zone
Alatsinainy Aprily 18, 2016 Alatsinainy Aprily 18, 2016 Douglas Karr
Inona ny peratra habe anaovanao? Ny peratra diamondra 1/2 karat ve dia hiseho be loatra eo amin'ny rantsan-tananao? Raha manana Printer 3D eo akaiky ianao, avelao i Brilliance manonta peratra fampiraisana prototype amin'ny habe marobe amin'izao fotoana izao ary andramo ao an-trano hahitanao azy manokana. Tsy mila mandao ny tranonao ianao ary mamaky fivoriana fivarotana fanerena be loatra miaraka amin'ny mpanao firavaka eto an-toerana, ankehitriny dia afaka miantsena amin'ny vidiny mirary sy vokatra tsara indrindra an-tserasera ianao ary matokia fa hifanaraka sy ho tsara tarehy amin'ny fofombadinao io!
Ity dia santionany fotsiny amin'ny indostria mivoatra izay hanova ny fomba fiantsenanay avy amin'ny fiononan'ny birao na tranontsika manokana.
Nihazakazaka i Coca-Cola a Mini ahy fanentanana izay namela ireo mpankafy hanonta ny maodely 3D mitovy aminy.
eBay Marina mamela ny mpampiasa misintona fampiharana ofisialy ary mamorona entana amidy sy kojakoja manokana.
Dita Von Teese no voalohany a 3D-pirinty akanjo, fiaraha-miasa eo amin'ny mpamorona Michael Schmidt sy ny mpanao maritrano Francis Bitonti.
Volkswagen dia namporisika ireo mpankafy Danoà volavola Polo nofinofisin'izy ireo amin'ny alàlan'ny tranonkalany.
BelVita Breakfast Biscuits dia nanambara fifaninanana vaovao miaraka amin'ny Amboara am-pirinty 3D anisan'ny loka.
Ho an'ny tranokala varotra an-tserasera, tsy manam-petra ny fahafaha-manao amin'ny personalization sy ny prototyping. Tsy misy zavatra haingana kokoa noho ny mandrora fiaraha-miasa eo amin'ny ekipa an-tserasera, na manonta ampahany manokana ho an'ny fiaranao ao anatin'ny minitra vitsy. Ny marika dia afaka manintona ny mpanjifa lalindalina kokoa amin'ny alàlan'ny fanolorana vokatra manokana ho azy ireo hanonta ao an-trano.
Ity infographic avy any Brilliance ity dia mandeha amin'ny alàlan'ny fomba 8 hanovan'ny fanontana 3D ny fiainantsika, avy amin'ny fomba fiantsenana, fihinanana, fampianarana, fiantsenana, fividianana trano, fiarovana ny tontolo iainana, ny fikarakarana ara-pitsaboana ary ny fampivelarana fomba hafa fanaingoana ny fiainantsika.
Tags: Fanontana 3dbelvitafamirapiratanacoca Colaebay marinalamaodymini ahyPoloVolkswagen